Somalia: Ciidamada Dowladda iyo Kuwa AMISOM oo la wareegay Degmada Diinsoor
Home Somali News Somalia: Ciidamada Dowladda iyo Kuwa AMISOM oo la wareegay Degmada Diinsoor
Ciidamada Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ciidamada howlgalka AMISOM oo maalmahii u dambeeyey waday howlgalo dagaal oo ka dhan ah Al-shabaab ayaa saaka gudaha u galay degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo xalay xili hore ay iskag baxeen Ururka Al-shabaab oo muddo sanado ah ka talinayey magaaladaas.
La wareegida degmada Diinsoor ayaa ka dhalan wax dagaal ah iyadoo ciidamada is-garabsanaya ay xalay hoydeen duleedka magalada Diinsoor oo ay labadii maalin u dambeeyey ay ku soo socdeen sidii ay ula wareegi lahaayeen.
Saraakiisha ciidamada Dowladda iyo AMISOM waxay sheegeen in si nabdoon ay gudaha ugaleen iyagoo xusay in ay jirtay miinooyin ku aasnaa wadooyinka oo ay sheegeen in ay ku guuleysteen in qaar qarxiyaan qaarna ay ka saaraan goobta.
Dadkii degmada Diinsoor oo maalmahii dambeeyey cabsi ka qabay in dagaal ka dhaco magaalada ayaa iskaga qaxay iyagoo u qaxay deegaano ka sii durugsan degmada oo ay Al-shabaab ku sugan yihiin, Dadka ku haray magaalada ayaa ka yar tirada qaxday.
Ururka Al-shabaab ayaa maalmahii u dambeeyey cadaadis dagaal iyo weeraro kala kulmaya ciidamada Huwanta ee Dowladda iyo AMISOM waxaana labo maalmood gudahood laga qabsaday labo magaalo oo muhiim u ahaa, maalin ka hor ayey isaga baxeen magaalada Baardheere.